အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ဆရာဖြစ်သူ ဦးကျော်သက်လင်းကို အရမ်းလေးစားမိကြောင်းပြောပြလာတဲ့ မြနှင်းရည်လွင်… – Cele Oscar
November 15, 2021 By L YC Knowledge
ပရိသတျကွီးရေ မွနျမာပွညျ ရဲ့လကျရှိနိုငျငံရေး အခွအေနတှေကေို အားလုံးသိကွမယျ ထငျပါတယျ‌။ ဖဖေျောဝါရီ လက စခဲ့တဲ့ နိုငျငံရေးမီးလောငျကြှမျးနတောဆိုရငျ ကိုးလကြျောအခြိနျ ကိုကွာမွှငျ့ခဲ့ပါပွီ။ အာဏာသိမျးတာကို လကျမခံတဲ့ ပွညျသူတှအေားလုံးနီးပါး ပါဝငျတဲ့ ဆန်ဒပွပှဲတှေ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာအနနေဲ့ပျေါပေါကျလာခဲ့တာပါ။ နိုငျငံတျောက ခနျ့အပျထားတဲ့အစိုးရဝနျထမျးတှကေလဲ CDM အနနေဲ့ပါဝငျ သပိတျမှောကျခဲ့ကွပါတယျ။ ထိုအထဲတှငျ အာဏာစသိမျးခဲ့တဲ့အခြိနျအစောပိုငျးကထဲက CDM ပွုလုပျခဲ့တဲ့ MRTV ရုပျသံရဲ့ သတငျးတငျဆကျသူ ကိုကြျောသကျလငျး တဈယောကျလဲ ပါဝငျခဲ့ပါတယျ။ ကိုကြျောသကျလငျး ဟာလကျရှိမှာလှတျမွောကျနယျမွမှော ရောကျရှိနတေယျဆိုတဲ့ အကွောငျးကို ပရိသတျတှကေို အသိပေးလာခဲ့ပါတယျ။ ဆရာတပညျ့ဖွဈတဲ့ မွနှငျးရညျလှငျ ကတော့ ဆရာဖွဈသူအတှကျ ဂုဏျယူဝမျးမွောကျနပေါတယျ။
သတငျးတငျဆကျသူ ကိုကြျောသကျလငျး ဟာ လှတျမွောကျ နယျမွရေောကျရှိနတေယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို ” တောထဲဝငျ ယူနီဖောငျးလေးဝတျ သနေတျလေးကိုငျပွီးဓာတျပုံရိုကျပွရငျ အဆငျပွမေလား…. ကနြျော fb accလေးပွနျရပွီး မိတျဆှတှေကေို လိုကျကွညျ့မိတယျ။အမြားအားဖွငျ့တော့ အရငျအတိုငျးပါပဲ… ကနြျောလား…? ကိုဗဈ ငှကျဖြား တုတျကှေး အားလုံးထိပွီး လှနျမွောကျခဲ့ပါပွီ။ ကိုယျရောစိတျပါ ကနျြးမာလကျြပါ။မီးစိမျး လေးမလငျး ပွနျမလာ ပွနျမဆုံတော့တဲ့မိတျဆှတှေအေတှကျစိတျမကောငျးကွီးစှာ ဖွဈမိပါတယျ။ မွို့ပွမှာ စိတျရောကိုယျပါဒုက်ခရောကျနကွေသူတှအေတှကျလညျး စိတျထိခိုကျရပါတယျ။ စိတျပူနကွေသူတှအေားလုံးကိုလညျး ကြေးဇူးတငျစှာ နှုတျခှနျးဆကျပါတယျ ” သူ့ရဲ့လူမှု့ကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါကနေ အသိပေးရေးသားထားတာကွောငျ့ ပရိသတျတှနေဲ့ မိတျဆှမြေားက လေးစားအံ့သွခဲ့ကွရပါတယျ။
အမှနျတရားအတှကျ လှတျမွောကျနယျမွရေောကျရှိနတေဲ့ “ကနျြးမာတျောမူကွပါစ”ဆိုတဲ့ အသံပိုငျရှငျ MRTV ရုပျသံရဲ့သတငျးတငျဆကျသူ ကိုကြျောသကျလငျး အတှကျဂုဏျယူ ဝမျးမွောကျရပါတယျ။ ပွညျသူဘကျတျောသား CDM သရဲကောငျး ကိုကြျောသကျလငျး ဘေးကငျးလုံခွုံပါစလေို့ ဆုတောငျးမတ်ေတာပို့သအပျပါတယျ။
ပရိသတ်ကြီးရေ မြန်မာပြည် ရဲ့လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေကို အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်‌။ ဖေဖော်ဝါရီ လက စခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးမီးလောင်ကျွမ်းနေတာဆိုရင် ကိုးလကျော်အချိန် ကိုကြာမြှင့်ခဲ့ပါပြီ။ အာဏာသိမ်းတာကို လက်မခံတဲ့ ပြည်သူတွေအားလုံးနီးပါး ပါဝင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါ။ နိုင်ငံတော်က ခန့်အပ်ထားတဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကလဲ CDM အနေနဲ့ပါဝင် သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ထိုအထဲတွင် အာဏာစသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်အစောပိုင်းကထဲက CDM ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ MRTV ရုပ်သံရဲ့ သတင်းတင်ဆက်သူ ကိုကျော်သက်လင်း တစ်ယောက်လဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုကျော်သက်လင်း ဟာလက်ရှိမှာလွတ်မြောက်နယ်မြေမှာ ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ပရိသတ်တွေကို အသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတပည့်ဖြစ်တဲ့ မြနှင်းရည်လွင် ကတော့ ဆရာဖြစ်သူအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်နေပါတယ်။
သတင်းတင်ဆက်သူ ကိုကျော်သက်လင်း ဟာ လွတ်မြောက် နယ်မြေရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ” တောထဲဝင် ယူနီဖောင်းလေးဝတ် သေနတ်လေးကိုင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်ပြရင် အဆင်ပြေမလား…. ကျနော် fb accလေးပြန်ရပြီး မိတ်ဆွေတွေကို လိုက်ကြည့်မိတယ်။အများအားဖြင့်တော့ အရင်အတိုင်းပါပဲ… ကျနော်လား…? ကိုဗစ် ငှက်ဖျား တုတ်ကွေး အားလုံးထိပြီး လွန်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာလျက်ပါ။မီးစိမ်း လေးမလင်း ပြန်မလာ ပြန်မဆုံတော့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်စိတ်မကောင်းကြီးစွာ ဖြစ်မိပါတယ်။ မြို့ပြမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေအတွက်လည်း စိတ်ထိခိုက်ရပါတယ်။ စိတ်ပူနေကြသူတွေအားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်စွာ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ် ” သူ့ရဲ့လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်ကနေ အသိပေးရေးသားထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆွေများက လေးစားအံ့သြခဲ့ကြရပါတယ်။
အမှန်တရားအတွက် လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက်ရှိနေတဲ့ “ကျန်းမာတော်မူကြပါစ”ဆိုတဲ့ အသံပိုင်ရှင် MRTV ရုပ်သံရဲ့သတင်းတင်ဆက်သူ ကိုကျော်သက်လင်း အတွက်ဂုဏ်ယူ ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ ပြည်သူဘက်တော်သား CDM သရဲကောင်း ကိုကျော်သက်လင်း ဘေးကင်းလုံခြုံပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပ်ပါတယ်။
မော်ဒယ်သန္တာလှိုင်နဲ့ သူ့မိသားစု တို့ရဲ့ မတရားဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်း….